Haweeneey Udhimatay Cabista COCA-COLA
Home Editors picks Haweeneey Udhimatay Cabista COCA-COLA
Mid kamid ah dhaqaatiirta sharciga ah ee wadanka New Zealand, ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in haweeneey 30 jir ah oo 2010 dhimatay, ay dhimashadeeda sabab u ahayd kadib markii ay badsatay cabista COCA-COLA.
Natsha Haris, ayaa dhimatay sanadkii 2010 kadib markii uu kusoo booday xanuun dhanka wadnaha ah, haweeneeydan ayaa maalin walbo cabi jirtay cabitaanka COCA-COLA.
Haweeneeydan oo dhashay caruur gaareeysa 8 ayaa waxay ku noolayd koofurta wadanka New Zealand, waxaana la sheegay sababta ugu weyn ee dhimashadeeda keentay ay tahay qaadashada qaybo badan oo Cabitaanka COCA-COLA ah.
Shirkada COCA-COLA, oo ka jawaabeysa hadalka kasoo yeeray dhaqtarkaan ayaa sheegtay inaan la xaqiijin in dhimashada haweeneydan uu sabab u ahaa cabitanka COCA-COLA.
Qoyska Natsha Haris, ayaa sheegay in kahor inteeysan dhiman ay aad ugu waalan jirtay Cabista COCA-COLA, waxayna sidoo kale xaqiijiyeen in hadii ay wayso Cabitankaas ayba xanuunsan jirtay mararka qaar.
Natsha Haris, ayaa maalinkii cabi jirtay 6-10ltr oo cabitaanka COCA-COLA ah, taasoo laba laab kabadan xadka maadada Cofee ah ee loogu tala galay bini aadanka, sidoo kale waxay laba laab ka badantahay xadka maadada Sokorta loogu tala galay qofka inuu maalinkii qaato, taasoo sababtay in markii danbe ay ku weyso qaybo badan oo ilkaheeda kamid ah, iyadoo ugu danbeyntiina waysay nafteeda.